ဆေးဆိုးစရာမလိုပဲ ဆံပင်ဖြူတွေ သဘာဝအတိုင်း ပြန်နက်စေရန်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဆံပင်ဖြူများ ပြန်နက်စေဖို့ ဦးရေပြားများ ဓာတု ဆေးဝါး ကင်းစေဖို့ ၁။ ရှား​စောင်းလက်​ပတ်​ကို ပါးပါးလှီးပြီးအုန်းဆီထဲမှာ မီး​အေး​အေးနဲ့ အညို​ရောင်​ သမ်းပြီး နွမ်းသွားသည်​ အထိ​ ကြော်​။ ၂။ ပြီးလျှင်​ အဖတ်​များက်ို ဆယ်​ယူပြီး ကျန်​ရှိ​သော အုန်းဆီ သက်​သက်​ကို ကြက်​သွန်​နီ​ ထောင်း အရည်​ ညစ်​ပြီး ရလာသော အရည်​နဲ့​ ရောပြီး ဦးရည်​ပြားထဲ စိမ့်​ဝင်​ သွား​အောင်​ စိတ်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ လူး​ပေး။ 3. ပြီးလျှင်​ ၁ နာရီ ၂ နာရီး​ ပေါင်း နှပ်​ထား။ 4. ပြီးလျင်​ ​ခေါင်း​လျှော်​ပစ်​။ အကျိုး​ ကျေးဇူးက​တော့ အံမခန်းဗျား။ ဆံပင်​ အဖြူ ထပ်​မထွက်​။ ဖြူ​နေ​သော ဆံပင်​ တစတစ နဲ့ အမဲ​ရောင်​သို့​ ပြောင်း။ ​ဆေးဆိုးရ သက်​သာပြီဗျို့။ Credit : Myo Thant Oo Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်
ဆံပငျဖွူမြား ပွနျနကျစဖေို့ ဦးရပွေားမြား ဓာတု ဆေးဝါး ကငျးစဖေို့ ၁။ ရှား​စောငျးလကျ​ပတျ​ကို ပါးပါးလှီးပွီးအုနျးဆီထဲမှာ မီး​အေး​အေးနဲ့ အညို​ရောငျ​ သမျးပွီး နှမျးသှားသညျ​ အထိ​ ကွျော​။ ၂။ ပွီးလြှငျ​ အဖတျ​မြားကျို ဆယျ​ယူပွီး ကနျြ​ရှိ​သော အုနျးဆီ သကျ​သကျ​ကို ကွကျ​သှနျ​နီ​ ထောငျး အရညျ​ ညဈ​ပွီး ရလာသော အရညျ​နဲ့​ ရောပွီး ဦးရညျ​ပွားထဲ…
သင့်ကို ဟာခနဲဖြစ်သွားစေမဲ့ ပဲကတ္တီပါရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ပဲကတ္တီပါလို့ပြောလိုက်ရင်ကို ထွေထွေးထူးထူးသိပ်ပြောစရာမလိုအောင်လူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အညိုရောင်ရင့်ရင့်လေးဖြစ်ပြီး စားလိုက်ရင် ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့်အရသာလေးနဲ့ စားကောင်းပါတယ်။ ပဲကတ္တီပါကို ပြုတ်ပြီးစားကြတာပါ။ ပြုတ်ပြီးသားပဲကတ္တီပါကိုမှာ ကြက်သွန်းစိမ်းနဲ့သုတ်စားတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်စားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်စားတတ်ကြပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ စားသုံးကြပါတယ်။
ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်နေတာလဲ ဒီစားကောင်းတဲ့ ပဲကတ္တီပါမှာ ပရိုတင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ fatty acids၊ ကစီဓာတ် နဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်တော်တေ်ာလေးအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ စားစရာတစ်ခုပါ။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ စားစရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပဲကတ္တီပါကနေရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေက သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်တယ် ပဲကတ္တီပါမှာ L-dopa လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်နေတာကြောင့် သိမြင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုကျန်းမာစေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုကျန်းမာစေ…
လတ်ဆက်သည့် ကန်စွန်းရိုးနီ၊ ရွက်ကျ ပန်းလိန်ရွက်ကို ရေးနွေးနှင့် ဖျောပါ။ ထို့နောက် ပါးပါးလှီး ဖြတ်တောက်၍ ငါးကျည်းခြောက်၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆီ၊ ဆား ထည့်၍ သံပရာရည် ဆမ်းကာ အသုပ်အဖြစ် စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် ဖြစ်ပေါ် နိုင်သော ဝမ်းကိုက် ရောဂါ၊ သွေးဝမ်း ကိုက်ရောဂါ၊ အမျိုးသမီးတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော မီးယပ် သွေးပုပ် ကျန်သော ရောဂါ၊ မီးယပ် သွေးမမှန်သော ရောဂါ၊ သားအိမ်လျှောကျသော ရောဂါ၊ သားမြတ်နာ (နို့အုံနာ)၊ နို့ထွက်နည်းခြင်း၊ ဇက်ကြောထိုးခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ ချောင်းဆ…
တစောင်းလက်ပ်(ခေါ်) ရှားစောင်းလက်ပပ်နှင့် အသည်းကင်ဆာ တစောင်းလက်ပပ်(ခေါ်) ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟု ခေါ်လိုက်လျှင် ကွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်တွင် မသိသူ မရှိလောက်အောင်ပင် လူသိများလှပါသည်၊၊ သို့သော် ရှားစောင်းလက်ပပ် ၏် အစွမ်းထက်လှသော ဂုဏ်သတ္ထိထူးများနှင့် ဆေးအသုံးကို ပြည့်စုံအောင် သိသူကား ရှားပါးလှပေ၏။
ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ကို ကျွန်ုပ်မိဘများ၏ ဇာတိမြေ ဖြစ်သော အညာဒေသတစ်ဝိုက်တွင် သဘာဝပေါက်ပင် အဖြစ် ပေါများစွာ တွေ့နိုင်ပေသည်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်သည် အပူဒဏ်ကို ကြံ့ကြံခံနိုင်သော သဘာဝရှိသည့် ထူးခြားသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်၊ အပင်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် လွှသွားကဲ့သို့ ဆူးလေးများ ပါရှိကာ အခွံ၏အတွင်းထဲတွင်တော့ အင်မတန် အေးမြ စိုစွတ်သော ရှားစောင်းလက်ပပ် အနှစ်ခေါ် ဂျယ်ရီအတုံးလေးများကို ထူးခြားစွာတွေ့ရလေသည်၊၊ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ ထူးခြားချက်မှာ အပင်ကိုနုတ်ရ်ျ ရက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားစေကာမူ အပင်သည် ညှိုးခြောက်မသွားပဲ ရှင်သန်နေသည်ကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရလေသည်၊၊
ထိုသို့ရက်ရှည်လများ ပစ်ထားသော်လည်း ညှိုးခြောက်မသွားပဲ တာရှည်ခံခြင်းမှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်အတွင်းသား ဂျယ်ရီတုံးကလေးများ၏ အစိုဓါတ် ကို ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သော ဂုဏ်သတ္ထိတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်…